WASIIRKA BEERAHA S/L AADAN DHOOLAYARE OO RASHI U QAYBIYEY QOYSAS DANYAR AH | Toggaherer's Weblog
Wasaaradda Beeraha Somaliland, ayaa shalay barnaamij Raashin-qaybin ka samaysay qaar ka mid ah xaafaddaha ay degenyihiin dadka danyarta ah ee magaalada Hargeysa.
Wasiirka Beeraha Aadan Axmed Cilmi (Dhoola-yare) oo horkacayay barnaamijkaa Raashin-qaybinta ah oo ay ku deeqday hay’ad samafal, waxa uu sheegay in mucaawimada Raashinka ah oo uu ku tilmaamay mid Nafaqo leh la gaadhsiin doono xaafadaha degmooyinka Caasimada ee ay ku dhaqan yihiin dadka Danyarta ahi. Waxa uu sheegay in Wasaarad ahaan ay xulista dadka jilicsan ee loogu talogalay in mucaawimada la gaadhsiiyo u xilsaareen guddoomiyeyaasha degmooyinka magaalada Hargeysa. “Marka hore, dadka xaafadda Maxamed Mooge, marti-sharafta iyo Haweenka ka tirsan Xisbiga UDUB-ba waan salaamayaa. Waxaynu halkan u joogaa maaha wax weyn oo umadda oo dhan la gaadhsiin karo, Illaahay baana dadka deeqdiisa wada gaadhsiiya,” ayuu yidhi Wasiirku. Wuxuuna intaa ku daray, in deeq noocan oo kale ah ay sannadkii hore gaadhsiiyeen dadka Danyarta ah ee xaafaddaha magaalada qaarkood, isla markaana waxa uu xusay in mucaawimadan ay gaadhsiin doonaan dhamaan xaafaddaha ay degen yihiin dadka Danyarta ah ee magaalada Hargeysa. “Raashinkaa hore ee aanu qaybinay wuxuu ahaa Bariis, kanina wuxuu ka kooban yahay Khudrado fara badan oo noocyo kala duwan isugu jir. Bariiskaa hore sidiisaa loo cunayay (marka la kariyo), laakiin kani waxa laga yaabaa inuu u baahdo Laxoox ama Roodhi in lagu darsado. Caruurta iyo dadka waaweynba wuu u wanaagsan yahay, waana Nafaqo,” ayuu yidhi Wasiirku.
Guddoomiyaha degmada Maxamed Mooge – Maxamed Xariir Cali, Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed (Aw-Xoog) iyo Caasha Aadan Caduur oo ku hadlaysay magaca dadkii deeqdaa la gaadhsiiyay oo iyana halkaa ka hadlay, waxay dhamaantood Wasaaradda Beeraha uga mahadnaqeen mucaawimada ay dadkaa jilicdasan gaadhsiisay.
Sidoo kale, waxa mucaawimadaa la gaadhsiiyay qoysas ka mid ah dadka degen Waaxda Axmed Macalin Haaruun. “Waa markii labaad ee Wasaaradda Beeruhu deeq noocan oo kale ah gaadhsiiso dadka Danyarta ah ee reer Hargeysa, gobolladana waanu u soo soconaa haddii Alle yidhaahdo oo iyaga laftooduna ayay u qaadanin in wax waliba ku kooban yihiin Hargeysa, balse waa bilaw oo mid ka badan baa iman doonta.” Sidaa ayuu yidhi Aadan-Dhoolayare oo hadal ka jeediyay munaasibadii deeqdaa lagu gudoonsiinayay dadka Danyarta ah ee ku dhaqan Waaxda Axmed Macalin Haaruun. Wasiirka Beeruhu waxa uu sheegay in barnaamijkan ay ka faa’iidaysan doonaan ilaa 1500 (kun iyo shan boqol) oo ka mid ah Qoysaska Danyarta ah ee ku dhaqan dhamaan degmooyinka Caasimadda Hargeysa ka kooban tahay, wuxuuna tilmaamay in tixgelinta la siin doono siday dadkaasi u kala jilicsan yihiin. Isla markaana waxa uu xusay in barnaamijkan Raashin-qaybinta ah ay ilaa maalmaha soo socda wadi doonaan.
Xil. Cabdiraxmaan Aw-Xoog iyo Guddoomiyaha degmada Macalin Haaruun Mr. Yuusuf Xuseen Kaahin oo halkaa ka hadlay ayaa ka mahadceliyay deeqdaas oo ay bixisay Hay’ad lagu magacaabo Local Initiatives for Education. ogaal